IZiko loLondolozo lweMbali laseDuncan Village libonisa umva kwimbali yamandulo yaseDuncan – Ntu News
Ngu Sesona Mqheliswa
IZiko loLondolozo lweMbali laseDuncan Village elasekwa ngonyaka ka-2018 nguNompumelelo Tshaka – Nyikana kunye neentombi zakhe uSihle noLihle yiNkampani eNgenaNzuzo ebonisa imbali yeDuncan Village. Eli nyathelo lenziwa ngumnqweno wokukhumbula, ukurekhoda, ukugcina, nokubhiyozela imbali yelokishi yaseDuncan ngebhongo kunye nomgangatho, ukukhuthaza ukuzingca ngabemi kubantwana nakwabahlali baseDuncan Village, kunye nokubakhumbuza ngobukhulu bangaphambili belokishi yabo. Injongo yayo kukuqaqambisa into eyayinenjongo yokuvuselela into eyiyo kunye nokubuyisela iDuncan Village kwicala elilungileyo laseMzantsi Afrika nakwihlabathi ngokubanzi.
“IZiko loLondolozo lweMbali laseDuncan Village ngokwenene liza kuba yindawo ephambili yesizwe njengoko sibalisa ngembali yale lokishi eyayikade intle kwaye idlamkile”, utshilo uNompumelelo Tshaka– Nyikana.
Imyuziyam ayigcini nje ngokugcina imbali etyebileyo yelokishi yaseDuncan, kodwa ikwabonelela ngamathuba emfundo yoluntu, ukufunda kunye nophuhliso. Izizukulwana ezizayo aziyi kuxhomekeka kwi-intanethi kuphela ukuba zifunde ngembali yaseDuncan Village, kodwa ziya kuba nokufikelela kwisikhumbuzo esibonakalayo apho banokukuva khona konke.
IZiko loLondolozo lweMbali laseDuncan Village lisebenza kwiiprojekthi ezininzi eziza kubhengezwa unyaka wonke. Ikwanazo neeprojekthi zokubandakanya uluntu, ezinje ngokuqeqesha abantu ukuba babe ngabakhokeli babakhenkethi kunye noonozakuzaku boluntu (okugqityiweyo), ukubhala imbali, nokuqokelela izinto zakudala (ezifezekisiweyo), ukukhuthaza iingxoxo kunye nokwenza iqonga lokubalisa amabali. Ikhuthaza ilifa lemveli ezikolweni ngemisebenzi eyahlukeneyo, kubandakanya nemidlalo ebonisa ilifa elityebileyo le-Eastbank ne-Westbank (Umdaniso, umxholo, umculo), imisebenzi yezemidlalo, umzekelo, imidlalo yemveli, ukuphakamisa iintsimbi, iminyhadala yenkcubeko, kunye namanyathelo esikolo asekwe Ilifa lemveli elityebileyo, umzekelo, uphando lwamagama esitrato, iinkqubo zokufikelela kwimveliso yokhenketho, kunye nophando lwembali yomlomo.
IZiko loLondolozo lweMbali laseDuncan Village lenze ubuhlakani neMyuziyam yaseMonti (isikhokelo, ukugcinwa kolwazi, ukukhethwa kwezinto. Umnyhadala woSuku lwaBasetyhini), kunye neWSU Department of Journalism (iprojekthi ibandakanya ukusebenzisana nabafundi be-WSU besi-3 ngeendlela ezahlukeneyo zosasazo bebalisa ibali laseAfrika), I-DSRAC (ucwangciso lweziganeko umz. Usuku lwemyuziyam olunamandla, umsitho wosuku lwabasetyhini kunye ne BCMDA.
Iziko lolondolozo lwembali lisandula ukuseta iWebhusayithi eza kuhlala kwiintsuku nje ezimbalwa apho abantu banokunxibelelana nabo ngothungelwano lwamajelo onxibelelwano. Abantu bangaqhagamshelana no-078 624 6039 okanye nge-WhatsApp okanye bathumele i-imeyile ku: mpura48@gmail.com
Ilali yaseDuncan (kwikona yezitalato iNdende / Kese kunye neMdaka) kulapho imyuziyam ikhoyo. Izenze ukuba ibengomnye wababhali bamabali abalulekileyo kwimbali nenkcubeko yamabali angabhalwanga e-eKasi. Le ndawo ikhethwe ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kubandakanya: ukufikeleleka kwabo bonke, amagumbi amakhulu akhoyo, izindlu zangasese ezaneleyo, kunye nokubiya.
← University of Pretoria recognises Dr Jotello Festiri Soga
Harambee tackling unemployment among SA’s youth →